बिष समान पानीपुरी र चटपटे : अमिलो बनाउन एसिडको प्रयोग...! - Sadrishya
बिष समान पानीपुरी र चटपटे : अमिलो बनाउन एसिडको प्रयोग…!
स्ट्रिट फुडको नाम लिनेबित्तिकै धेरैजसोले पानीपुरी र चटपटे सम्झिन्छन् । अमिलो/पिरो खान मन पराउनेका लागि यी खाद्यपदार्थ रोजाइमा पर्छन् । विशेषगरी, युवतीमाझ पानीपुरी र चटपटे लोकप्रिय छ । कतिपयले खाजाका लागि खान्छन् भने कतिले स्वादका लागि मात्र । पानीपुरी र चटपटे संस्कृति भारतबाट सुरु भएको हो । पछिल्लो समयमा यो नेपालमा समेत व्यावसायिक रूपमै अघि बढेको छ । साथै, यी पदार्थ एसियाका अन्य केही देशमा समेत खाने गरिन्छ ।